Church and state -- Zimbabwe. : The politics of reconciliation : Zimbabwe's first decade / Victor de Waal 1990 1
Church and state -- Zimbabwe -- History -- 20th century. : In the footsteps of the masters : Desmond M. Tutu and Abel T. Muzorewa / Dickson A. Mungazi 2000 1
Zimbabwe -- Church history 2
Zimbabwe -- Church history : Domesticating a religious import : the Jesuits and the inculturation of the Catholic Church in Zimbabwe, 1879-1980 / Nicholas M. Creary 2011 1
Cities and towns -- Zimbabwe. : Politics in an urban African community / A. L. Epstein 1958 1
Civil-military relations -- Zimbabwe : Soldiers and the state in Zimbabwe / Godfrey Maringira 2019 1
Civil rights -- Zimbabwe. 3
Climatic changes -- Zimbabwe. : Water and soil in holy matrimony? : a smallholder farmer's innovative agricultural practices for adapting to climate in rural Zimbabwe / Christopher Munyaradzi Mabeza 2017 1
Climatic changes -- Social aspects -- Zimbabwe : Community resilience under the impact of urbanisation and climate change : cases and experiences from Zimbabwe / edited by Innocent Chirisa & Christopher Mabeza 2019 1
Zimbabwe -- Colonial influence. 5
Zimbabwe -- Colonization. : Colonialism & violence in Zimbabwe : a history of suffering / Heike I. Schmidt 2013 1
Zimbabwe -- Commerce. : South Africa. Correspondence (December, 1918-December, 1921) relating to the claim of the British South Africa Company in respect of its administrative expenditure in Southern Rhodesia 1922 1
Zimbabwe -- Commercial policy. 2
Commons -- Zimbabwe. 2
Communication -- Zimbabwe. : Zimbabwe Media, Internet and Telecommunications Complete Profile 2010 1
Communication and traffic -- Zimbabwe. : Zimbabwe Media, Internet and Telecommunications Complete Profile 2010 1
Community development -- Zimbabwe 3
Community museums -- Zimbabwe -- Binga District : Heritage practices for sustainability : ethnographic insights from the BaTonga Community Museum in Zimbabwe / Munyaradzi Mawere 2016 1
Competition -- Zimbabwe. 3
Conflict diamonds -- Zimbabwe : Facets of power : politics, profits and people in the making of Zimbabwe's blood diamonds / edited by Richard Saunders and Tinashe Nyamunda 2016 1
Conflict management -- Zimbabwe. : Regional intervention politics in Africa : crisis, hegemony, and the transformation of subjectivity / Stefanie Wodrig 2017 1
Conservation of natural resources -- Zimbabwe -- Case studies. : Challenges and opportunities of conducting exploratory qualitative research on politically sensitive topics : understanding the politics of natural resource governance in Zimbabwe / Hamauswa Shakespear 2019 1
Zimbabwe -- Constitution. : Rhodesia : proposals for a settlement / presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs 1977 1
Constitutional history -- Zimbabwe. : A peace in southern Africa : the Lancaster House Conference on Rhodesia, 1979 / Jeffrey Davidow 1984 1
Constitutional law -- Zimbabwe. 2
Counterinsurgency -- Zimbabwe 2
Country risk -- Zimbabwe -- Periodicals. : Zimbabwe country report 1
Criminal law -- Zimbabwe. : An introduction to Zimbabwean law / Lovemore Madhuku 2010 1
Crops and climate -- Zimbabwe. : Water and soil in holy matrimony? : a smallholder farmer's innovative agricultural practices for adapting to climate in rural Zimbabwe / Christopher Munyaradzi Mabeza 2017 1
Cultural landscapes -- Zimbabwe : Memory and cultural landscape at the Khami World Heritage site, Zimbabwe : an un-inherited past / Ashton Sinamai 2019 1
Cultural property -- Protection -- Zimbabwe. : The preservation of Great Zimbabwe : your monument, our shrine / Webber Ndoro 2005 1
Cultural property -- Protection -- Zimbabwe -- 21st century. : African museums in the making : reflections on the politics of material and public culture in Zimbabwe 2015 1
Dairy products industry -- Zimbabwe -- Management : A matter of entrepreneurial decisions : Dairibord Holdings Limited (DHL) in Zimbabwe / Amon Simba (Division of Management, Nottingham Trent University, Nottingham, UK) 2018 1
Debts, External -- Zimbabwe. : Zimbabwe : challenges and policy options after hyperinflation / Vitaliy Kramarenko [and others] 2010 1
Debts, Public -- Zimbabwe. : Zimbabwe : challenges and policy options after hyperinflation / Vitaliy Kramarenko [and others] 2010 1
Decolonization -- Zimbabwe 5
Demand for money -- Zimbabwe. 2
Democracy -- Zimbabwe. 3
Zimbabwe -- Description and travel. 7
Zimbabwe -- Description and travel : African laughter : four visits to Zimbabwe / Doris Lessing 1992 1
Zimbabwe Description and travel 1981- -- See Zimbabwe Description and travel
Zimbabwe -- Description and travel : Background note, Zimbabwe Bureau of African Affairs 2011 1
Diamond industry and trade -- Corrupt practices -- Zimbabwe : Facets of power : politics, profits and people in the making of Zimbabwe's blood diamonds / edited by Richard Saunders and Tinashe Nyamunda 2016 1